Miezaha mba tsy hijery ny Keyboard. Dia ho sarotra izany amin'ny voalohany, fa rehefa handroso amin 'ny alalan' ny fanazaran-tena ianao, dia lasa mora kokoa ny mahita azy sy ny rantsan-tananareo hanomboka handroso tsy misy fahatsiarovan-manapa-kevitra ianao izay ampifandraisina amin'ny rantsan-tànany, izay manan-danja.
Rehefa mianatra nitendry milina fanoratana, jereo ambonin'ny Keyboard mba hahita izay hampiasa fanondrony. Aza matahotra ny hanao diso - raha manao, ny fandaharana dia hasehoko anao ny marina mampiasa fanalahidy. Raha toa ka marina ny famaha, dia midika maitso, raha tsy mety - dia mena.
Miezaka mampahafantatra avy hatrany vao fahalalana ao anatin'ilay asa isan'andro eo amin'ny solosaina, dia tsy misy fomba tsara kokoa ny fomba hianatra any vao soratany.
Manangana ny fandaharam-potoana. Raha tsy mametraka fandaharam-potoana ho an'ny fianarana, dia mora ny mahita fialan-tsiny noho ny tsy manao.
Maso hatrany ny isan'ny fahadisoana tena sy hifantoka amin'ny fampihenana ny fahadisoana amin'ny fitsapana ho avy fa tsy mampitombo ny any vao soratany haingana. Ny vokany dia hitombo mamokatra.
Mety ho tsara ny hoe amim-pahanginana ny anaran 'ny manan-danja rehefa hamely azy. Aza avela ny fahadisoana mahatonga anao tsy hanana fo; mikasika any vao soratany dia fahaiza-manao izay azo ianarana amin'ny fomba fanao.
Mahareta. Raha vao ny marina rantsan-keystroke lamina no nianatra, hafainganam-pandeha sy ny marina voajanahary izany.
Mifindra ilaina ihany ny fanondrony mba hamely ny fanalahidy. Aza avela hafa rantsan-hirenireny lavitra ny nanendrena fanalahidin 'ny laharana an-trano.
Ny rantsan-tananareo tokony ho eo amin'ny laharana an-trano sy ny tanana fanalahidy tokony slant amin'ny zoro ihany toy ny Keyboard. Aoka tsy ho kamo ny hatotanany sy ny fitsaharana manohitra ny latabatra na ny Keyboard.
Manao fanazaran-tena tsirairay imbetsaka raha tsy afa-po amin'ny fahaiza-manao any vao soratany.
Aza Bang ny fanalahidy. Miezaka mampiasa hery ho kely araka izay azo atao. Miala sasatra eo sasatra teny amin'ny rantsan folo rehetra ambonin'ny ny fanalahidy.
Mba hiala sasatra ny tanana tsy activating fanalahidy Mitete ny rantsantanana dimy niara-na aiza na aiza eo amin'ny Keyboard ambonin'ny.
Peho fanalahidy tsirairay ho afa-maina, fa ny mariky crisply amin'ny rantsan-tànany anankiray amin'ny fotoana, mitandrina mba tsy nahy ny hampiasa unintended fanalahidy.
Hampavitrika Auto-hamerenany ny hoe: mihazona iray mikasika sy rantsan-tànany teo amin'ny irina fanalahidy. Hampitraka ny rantsan hampitsahatra Auto-Averimbereno.
Nitendry lalao dia fomba mahafinaritra mba hanatsarana ny any vao soratany haingana sy araka ny marina. Hiala voly raha mianatra!
Ny fanazaran-tena sy ny fandrindrana rantsan mampihena ny adin-tsaina fanazaran-tena hanampy ny tebiteby, ary matetika izy ireo no hanisy tsiky eo amin'ny tavanao. Ny falifaly sy tontolo iainana mahafinaritra dia afaka manampy ny fianarana ho fihomehezana.
Antoka ianao mamela, fara fahakeliny, isaky ny 30 minitra ny lesona.
Hahazoana antoka fa mitandrina ny rantsan-tananareo tena akaiky ny toerana an-trano araka izay azo atao, ary manamaivana ny tananao hetsika raha mbola mianatra ianao.
Ny fianarana nitendry milina fanoratana dia ny manao fahadisoana rehetra, ka aza kivy raha namely ny ratsy fanalahidy.
Miezaha nitendry milina fanoratana amin'ny hafainganam-pandeha tsy tapaka.
Manainga ny hatotanany hanampy antoka ny rantsan-tananareo afaka mitsimoka nidina ka namely ny fanalahidy haingana sy araka ny marina.
Ny mifamadika izy eo ambony / ambany tranga fampiasana ny mifanohitra amin'izany tanana foana. Fanamarihana: ny taratasy amin'ny solosaina findainy-panendry ny sasany dia mety ho akaiky kokoa miaraka.
Hamarino ny lavitra avy amin'ny Keyboard. Manitsy ny seza mba tsy olana iraisana - nipetraka teo akaiky loatra ny Keyboard. Hanitsy ny zoro ny manara-maso mba hampihenana glare.
Arakaraka ny manaraka, ny tsara kokoa dia nitendry sy hampitombo ny hafainganam-pandeha.
Raha tsy fantatrao tsara izay taratasy na manan-danja maro no ianao, dia tsy ho afaka nitendry milina fanoratana azy tsy mijery eo am-Keyboard.
Raha azo atao, miezaka manao amin'ny Keyboard tsy tapaka fa tsy Laptop Keyboard.
Hahazo aina ny Keyboard sy ho azo antoka fa ao amin'ny marina avo noho ny rantsan-tananao.
Alohan'ny manomboka ny fitsapana hafainganam-pandeha ho any vao soratany antoka fa mipetraka ny mahitsy, ny tongotrareo fisaka teo amin'ny tany. Ataovy ny elbows akaiky ny vatanao, ny hatotanany mahitsy sy ny forearms sehatra sy hahatsiaro ny haka fiatoana tsy tapaka.
Hialana sasatra fanazaran-tena: Aelezo ny rantsan-tànany lavitra ankoatra. Mihazona ny dimy segondra, dia niala sasatra. Avereno ho fitambarany in-telo.
Aoka ho azo antoka mba ho mendrika ny any vao soratany haingana tsindraindray - miaraka amin'ny fitaovana azonao atao ny manamarin ny fandrosoanao eo amin'ny samy haingana sy araka ny marina rehefa mianatra. Ny isan'ny teny isa-minitra dia milaza ny haavon'ny any vao soratany.
Nitendry fitsapana refesina zavatra roa, hafainganam-pandeha sy ny fahadisoana, ka rehefa maka ny any vao soratany haingana fitsapana, aza mijery ny hafainganam-pandeha ihany amin'ny.
Raha ny Keyboard avo loatra (seza ambany loatra) fahadisoana mirona ho tonga eo an-tampon'ny Keyboard andalana. Raha ny Keyboard ambany loatra (seza avo loatra) fahadisoana mirona ho tonga eo ambany Keyboard andalana.
Hialana sasatra fanazaran-tena: Efa ny tananao napetraka tao amin'ny toerana mitovy amin'ny fanitarana ny hato, mampihatra fanerena-katsaram-panahy ny hafa mampiasa tanana tamin'ny maharitra indray ankihibe amin'ny tari-dalana sy midina. Mihazona ny dimy segondra sy niala sasatra. Avereno izany in-telo isan-tanana.
Mety mitaky na roa isan-kerinandro mba ho amin'ny hafainganam-pandeha ny ~ 50 teny isa-minitra raha mampihatra 30-60 minitra isan'andro. Mahareta.
Haninjitra ny hatotanany sy ny rantsan-tananareo alohan'ny hanaovana ny fitsapana any vao soratany.
Raha te hanao nitendry mora kokoa, dia tokony hanatsara ny dexterity. Manampy raha milalao gitara na fitaovana hafa izay mitaky ny tananao.
Hialana sasatra fanazaran-tena: Ahinjiro fitaovam-piadiana roa outwards amin'ny rantsantanany ary asaivo manao faribolana tanana, Rotating azy ireo tao amin'ny hato. Boribory dimy tamin'ny lalana iray, dia dimy tany amin'ny lalana mifanohitra.
Chat amin'ny namana sy ny fianakaviana.
Hamita ny lesona tsirairay, dia hiezaka ny fitsapana hafainganam-pandeha.
Rehefa nianatra nitendry milina fanoratana, dia tena zava-dehibe ny hanaraka ny fandaharam-potoana ny fomba fanao tsy tapaka, na ny rantsan-tananareo dia manomboka ho very ny hozatra fitadidiana.
Hialana sasatra fanazaran-tena: Tazony ny fitaovam-piadiana amin'ny palma ivelany atrehin'ny teo. Atsangano ny tanana ka toy ny hoe ianao milaza olona intsony. Ny fampiasana ny mifanohitra amin'izany tanana, mampihatra fanerena amin'ny pelatanan'ny ny nanangana tanana. Mihazona ny fanerena nandritra ny dimy segondra, dia niala sasatra. Avereno ho tanteraka ny in-telo isan-tanana.
Raha mianatra nitendry haingana raha mbola nijery ny keyboard, fa hanohy ny mandalo fotoan-tsarotra amin'ny fahadisoana tsipelina sy ny vavan'i rehefa mivoaka ho tena tontolo izao toe-javatra nitendry satria tsy ho hita ny fahadisoana teo amin'ny efijery.
Drape tanana servieta ny tananao am nitendry milina fanoratana.
Atombohy miadana sy hianatra ny rehetra eo anatrehanao Keyboard mianatra nitendry haingana.
Raha mahatonga anao any vao soratany fanaintainana, mijanona avy hatrany ary makà aina.
Ianareo raha mampihatra amin'ny tontolo miasa, miezaka ny hifampiraharaha amin'ny mpampiasa nandritra ny fotoana tony ny andro mba hanokana ny fampianarana - ny mpampiasa Hitondra soa ho avy amin'ny fahaiza-manao vaovao.
Dia tsara ny tsy mijanona amin'ny toerana iray ho an'ny fe-potoana omena. Handrava ny andro amin'ny asa alternating rehefa azo atao izany.
Mety hanampy anao ny mampiasa fanairana mba hampahatsiahy ny tenanao mba haka aina avy amin'ny Keyboard.
Hialana sasatra fanazaran-tena: Tazony ny sandrinao ivelany, atrehan'ny ny rofia teo. Mitete ny tànany amin'ny hato midina. Ny fampiasana ny pelatanan'ny mifanohitra tanana, mampihatra fanerena aoriana ny nitete tanana. Mihazona ny fanerena nandritra ny dimy segondra, dia niala sasatra. Mamerina in-telo isan-tanana.
Toy ny fampiasana solosaina nitombo na any am-piasana sy ny an-trano tao anatin'ny taona vitsivitsy miverimberina sacrés Ratra Lasa mifandray amin'ny fampiasana Keyboard.
Mba hampihenana ny mety ho fampivelarana ny fahazarana mampiasa ratra tokony hanaraka fomba fanao tsara indrindra amin'ny fihetsika, teknika, workstation nametraka-tsy tapaka sy handray an fiatoana.
Ny hato, elbows sy Keyboard tokony ho toy izany koa eo amin'ny fiaramanidina marindrano sy amin'ny zoro 90 ambaratonga ambony ny fitaovam-piadiana. Ny ambony ny efijery tokony ho haavon'ny maso akaiky.
Tsy mijery ny Keyboard rehefa nitendry milina fanoratana. Solafaka fotsiny ny rantsan-tananareo manodidina mandra-pahitany ny laharana an-trano marika. Aza manitikitika ny fanalahidy. Andramo ny fampiasana araka ny hery kely araka izay azo atao.
Fahombiazana sy ny fanatsarana miankina amin'ny tapa-kevitra ny hifikitra amin'ny mikasika any vao soratany rehefa avy nahavita ny fianarana. Ho an'ireo izay mety hisalasala, hevero fa ho mihoatra noho ny indray ny fotoana mianatra herinandro vitsivitsy avy mamokatra bebe kokoa.
Tokony koa ny mianatra mampiasa ny fanalahidy lehibe mbamin'ny Ctrl sy Alt fanalahidin '- izany no tena mahasoa ny Keyboard hitsin-dalana.
Ampiharo eo amin'ny toe-javatra tena fiainana dia fomba lehibe kokoa sy hanatsara ny fahaiza-manao hanangana ny toky.
Manokana amin'ny fomba fanao tsy tapaka 'Speed ​​fitsapana' ny hanatsara ny any vao soratany haingana.